Prezidantiin federeeshinii fannoo diimaa fi baatii diimaa Firaanchescoo Rookaa fi prezidaantiin waldootii kanaa kan Itiyoopiyaa obbo Abarraa Tolaa kaleessa naannoo Tigraay erga daawwatanii booda ibsa kennanii jiran.
Ibsa keleessa galgala kennameen fannoo diimaan naannoo Tigraayitti sochii inni godhu akkasumas haalli gargaarsi namoomaa irra jiru tuqamee jira. Prezidantiin federeeshinii fannoo diimaa fi baatii diimaa Firaanchescoo Rookaa akka jedhanitti keessumaa tajaajjilli eegumsa fayyaa deebisee itti fufuun baay’ee barbaachisaa dha.
Waaltaalee eegumsa fayyaa hamma danda’ame hatattamaan tajaajilaaf banaa gochuu qabna. Haala nama gaddisiisuun waaltaaleen eegumsa fayyaa hedduun waan saamamaniif jecha, talaalliin dhaabatee jira. Meeshaan talaallii sana akka hin banne keessa tursanis cabeera. Akka haaraatti jalqabuu qabna. Sagantaaleen HIV fi TBs dhaabataniiru.
Naannolee buqqaatonni qubatanii jiran haala qulqullinaa gaarii hin ta’in irraan kan ka’e koleeraa fi dhukkuboonni ka biroon ka’uu mala yaaddoon jedhus jira. kanaaf jecha buqqaatota qubsuma keessa jiranii fi hawaasa bakka sana jiruuf hojii eegumsa gochuu saffisuun barbaachisaa dha.
Sababiin isaas kun fudhatama hin qabu. Buqqaatota qofaa utuu hin taane jireenya hawaasa naannoo sana jiraatus balaa irra buusa jedhan.
Eennaa daawwannaa isaanii illee haala Tigraay keessaa argan ilaalchisee hoogganoota Itiyoopiyaa waliin marii qajeelaa geggeessuu isaanii illee prezidaantichi ibsaniiru.
Ibsi gaazixeessotaaf kenname kun keessumaa gama fannoo diimaatiin deggersaa fi yaaliin gargaarsa namoomaa kenname kan itti ibsame ture. waldaan kun hanga yoonaa Tigraay keessaa namoota 340,000 dhaqqabuun isaa ibsame jira. kanaafis doolaarri kummi $900 baasii godhamuun beekamee jira.
Waldaan fannoo diimaa Itiyoopiyaa lolli Tigraay jalqabamuu isaa dura iyyuu karaa caasaa isaa hanga gadiitti gad bu’aniin deggersa gochuu prezidaantichi obbo Abarraa Tolaa Gaazixeessotaaf ibsaniiru.